Dနေမင်း(နည်းပညာ): Apple Pay ပါဝင်သည့် iOS 8.1 အား အောက်တိုဘာ ၂၀ တွင်ကြေညာမည်
Apple Pay ပါဝင်သည့် iOS 8.1 အား အောက်တိုဘာ ၂၀ တွင်ကြေညာမည်
Credit Card များနေရာတွင် အစားထိုးနိုင်မည့် Apple Pay လုပ်ဆောင်ချက် ပါဝင်သော iOS 8.1 အား ယခုလ ၂၀ ရက်နေ့တွင် ကြေညာဖွယ် ရှိကြောင်း သိရသည်။
Apple Pay ဝန်ဆောင်မှုအား iPhone, iPad, iPod Touch စသည့် iDevices များနှင့် အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ် သော်လည်း နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားသည့် iPhone6သို့မဟုတ် 6Plus တို့နှင့် တွဲဖက် အသုံးပြုပါက ပိုမို ကောင်းမွန်ဖွယ် ရှိကြောင်း လေ့လာသူများက ဆိုသည်။
Apple ၏ OS သစ်တွင် Apple Pay အပြင် အခြား Feature သစ်များလည်းပါဝင်မည်ဟု GSM Arena ကဖော်ပြ သည်။ထို့ပြင် နောက်ဆုံး ထွက်ရှိထားသည့် iOS တွင် ဖယ်ရှားခဲ့သော Camera Roll အားလည်း ပြန်လည် ထည့်သွင်းဖွယ် ရှိကြောင်း သိရသည်။
အခြားသတင်းတစ်ရပ်တွင်မူ Apple သည် ထုတ်ကုန်သစ်မိတ်ဆက်ပွဲများအား ယခုလအတွင်း ဆက်တိုက် ပြုလုပ် သွားဖွယ်ရှိကြောင်း ဖော်ပြသည်။ အောက်တိုဘာ ၂၀ ရက်နေ့တွင်ကျင်းပမည့် iOS သစ် မိတ်ဆက် ပွဲပြီးနောက် ဆက်တိုက်ဆိုသလိုပင် iPad Air နှင့် iPad Mini တက်ဘလက်သစ်မိတ်ဆက်ပွဲများ ကျင်းပ သွားဖွယ်ရှိကြောင်း ယင်းသတင်းကဆိုသည်။
Posted by Thu Rein at 7:09 PM
့ IObit Driver Booster v2.0.3.69
A13 Tablet Firmware များစုစည်းမှု
Adf.ly နဲ့ မုန့်ဖိုးရှာမယ်.
Android 4.4.4 KitKat On Samsung Galaxy S3 Rom
Apk စုစည်းမှု့
CD/DVD အခွေ Burn ဖို့အလွယ်ဆုံးဆော့ဝဲလ်
Facebook Apk စုစည်းမှု့များ
Facebook free သုံးနည်း
Fake ID Generator v2.4 apk်-
Fast Pro for Facebook v2.8.0 apk
Galaxy S Duos2GT- S7582L 4.2.2 လွယ်ကူစွာRootလုပ်မယ်
Hard Disk အပိုင်းခွဲခြင်း Restore
HD Camera Pro v1.5.2 APK
Huawei 730 (Too-Coo-U10-U30)အတွက်Root
Huawei Official firmware များ
Huawei Y300-Official firmware-Flash-file
I- Mobile Rom စုစည်းမှု့
iMobie v1.6.2 Build 20141022 + Key
Imobile IQ 5.7 Firmware တင်နည်း
Internet Booster v4.5.1 apk
K-Lite Codec Pack 10.8.2 (Full Version)
KMPlayer 3.9.1.130 Final Full Version
Lenovo 4.2.2 stock firmware
Mega2version 4.4.4 Firmware
Mojosoft Photo Frame
MPPG Font Tool v1.2 APK
Note4 All CWN
pattern-pin-password *LOCK ဖြည့်နည်း
PC Utilities Pro Driver Pro 3.2.0.2
PIN LOCK နှင့် Data Reset
ProgDVB Professional Edition 7.07.4 + Reseter
s3 Gt I9300 Android 4.4. တင်နည်း
Samsung Galaxy Grand2SM-G7102 ( 4.4.2 ) ကို ROOT
Samsung Phone firmware များ(5)
Samsung Rom စုစည်းမှု့
Slideshow ဖန်တီးလို့ရတဲ့ ဆော့ဝဲလ်
Telenor Myanmar Self-Care App
Video Show Pro v3.6.8
Window 10 Theme v1.1 APK
Window 8.1 Enterprise (32bit
Windows 10 Tech
Windows Doctor 2.7.9 Final
Windows Myanmar Translator
Yamicsoft Windows7Manager 5.0.2 Keygen
Zenfone4KitKat ကို Root ပြုလုပ်နည်း
ဘာခလုတ်မှမနှိပ်ပဲ Recovery mode ဝင်နည်း
ဘလော့မှာ3D Text စာလုံးတွေရေးနည်း
ဘလော့မှာ အလွယ်ကူဆုံး Music Player လေးထည့်နည်း
မိမိကွန်ပျူတာမှာ Autoplay Program ကို ပိတ်နည်း
ိ Root မလို version 4.4.4 ထိ အလွယ်တကူ သွင်းနည်း
မြန်မာ မော်ဒယ်လေးတွေရဲ့ အလန်းပုံလေးတွေကို စုစည်းပေးထားတဲ့ APK ပါ။ လိုချင်ရင်တော့ အောက်ကလင့်မှာဒေါင်းနိုင်ပါတယ်။ Google Play ကဒေါင်...
[ROM] Huawei Ascend G6 - Official firmware [U00 U10 U251 L11 L22 L33 C00]
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်တာင်းထားလို့Huawei G6 - Official firmwareလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာလိုအပ်သူများအောက်မှာယူပါ I have2new Firmware Versi...
အေ အစာလည်းဆေး၊ ဆေးလည်း အစာဆိုပြီး ရှေးကတည်းက တင်စား ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။ နေ့စဉ် ကျန်းမာရေး အတွက် အစားအစာရဲ့ ကဏ္ဍက အရေးပါသလို အရက်နာကျတာ၊ ရာသ...
COC ဆော့တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အတွက် သတင်းကောင်းလေးပါ
COC ဆော့တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အတွက် သတင်းကောင်းလေးပါ မသိသူကျော်သွား သိသူဖော်စားပေါ့ဗျာ ကိုယ်အဆင်ပြေလို့မျှ လိုက်တာ Gem တွေ လိုသလောက်ခိ...
Xiaomi Redmi Note3ကို TWRP Recovery သွင်းပြီး Root လုပ်နည်း
Xiaomi Redmi Note3ဖုန်းကို Root လုပ်ချင်တဲ့ညီအကိုတွေအတွက် TWRP ကိုထည့်သွင်းပြီး SuperSu ဖိုင်ဖြင့် Recovery Mode ကနေ အလွယ်တကူ Root ...
Playstore မပါ​သောဖုန်းများအားplaystore သွင်းနည်း
Google service မပါသောဖုန်းများအား google service ထည့်သွင်းနည်းgoogle service မပါတဲ့ ဖုန်းတွေ အကြောင်းအရင်ပြောမယ်ဗျာ။ go...
အင်တာနက်, Facebook free သုံးနည်း
အားလုံး မျှော်လင့်နေတဲ့ အင်တာနက် free သုံးနည်း လာပါပြီ ခင်ဗျာ တစ်ကယ် သုံးလို့ ရပါတယ်။ အဓိကအချက် ကတော့ ဖုန်းမှာ ပိုက်ပိုက်...
Facebook Acc ဟတ်​ခံထိခဲ့ရင်​ပြန်​ယူနည်း
မိမိ အသုံးပြုနေတဲ့ facebook အကောင့် ဟက်ခံရပြီး ဆိုရင်ဘယ်လောက် စိတ်ညစ်ဖို့ ကောင်းလဲဗျာအဲ့တော့ စိတ်ညစ်ရမယ် အကြောင်းတွေ ခဏထားမိမိ facebook...
Root လုပ်ရန် အကောင်းဆုံး Software များ (PC + android) [ Android ] [ Coolpad ] [ HTC ] [ Huawei ] [ LG ] [ Oppo ]...
Dနေမင်း(ဧရာဝတီ). Watermark theme. Powered by Blogger.